Hawukela Izingxenye Abakhiqizi - China elingasebenzi Izingxenye Suppliers, Factory
Yomugqa Okugcwele Izinsiza kusebenza
Cold Rolling Izinsiza kusebenza
Amapharamitha Technical: Five-ame Tandem Cold Rolling Mill
Hot Rolling Izinsiza kusebenza
Universal Joint Shaft,
Cross-oluvala amasondo Universal Coupling
Ezivamile Cross-oluvala amasondo Universal Coupling
High-speed Cold Rolling Cross-oluvala amasondo Universal Coupling
Heavy-duty Cross-oluvala amasondo Universal Coupling
Elikhulu Cross-oluvala amasondo Universal Coupling
Ezivamile Cross-oluvala amasondo Universal Coupling:
It is kabanzi ngoba amandla ukudluliselwa imishini Metallurgical.
· Okudluliseka kahle, ukuthambekela esikhulu ongaphakeme umsindo ukugijima;
· Ashukumisayo ibhalansi Ukunemba okuphezulu, kuze G16 ~ G6.3;
· Isakhiwo umkhiqizo iye elungiselelwe izikhathi eziningana, futhi kulula ukufaka kanye nokugcina;
· Izindlela ezinqala zokulawula ukusebenza inqubo umkhiqizo yokukhiqiza ukuze aqinisekise izinga okunokwethenjelwa;
· Le nkampani iye isingathwe / nengxenye ekuthuthukiseni umkhakha amazinga (2 namazinga kazwelonke, 4 umkhakha amazinga);
· Ukuvikelwa Core patent (18 ezisunguliwe / imodeli Umbuso indawo patent);
· Kunconywe imikhiqizo esezingeni Taier ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende;
Amapharamitha Technical Of yomkhiqizo:
Operating lokushisa: -20 ~ + 80 ℃
Torque ububanzi: 18kNm ~ 1500kNm
Swing ubukhulu: 160 ~ 590mm
Ukufakwa engela: ± 15 °
umjikelezo Isondlo: 360h / izikhathi
High-speed Cold Rolling Cross-oluvala amasondo Universal Coupling:
It is ikakhulukazi elisetshenziswa idrayivu eyinhloko abandayo iphuma ishidi ukukhiqizwa umugqa.
· High-umthwalo ethwele amandla futhi enkulu yokudlulisela torque engu;
· Akuphoqelekile ephezulu ukucacisa ofanayo spline pair;
· High ashukumisayo ibhalansi ukunemba, kuze G6.3;
· Ukudluliswa High kahle, kuze kufinyelele 98,7% -99,9%;
· Le nkampani iye isingathwe / nengxenye ekuthuthukiseni umkhakha amazinga (1 standard kazwelonke, 1 umkhakha amazinga);
· Ukuvikelwa Core patent (8 ezisunguliwe / imodeli Umbuso indawo patent);
Torque ububanzi: 130kNm ~ 1150kNm
Swing ubukhulu: 285 ~ 550mm
Ukufakwa engela: ± 5 °
Isondlo umjikelezo: 360h / isikhathi
Heavy-duty Cross-oluvala amasondo Universal Coupling:
It is ikakhulukazi elisetshenziswa idrayivu eyinhloko ishidi ashisayo iphuma, steel pipe nesigaba steel ukukhiqizwa umugqa kweqa esigayweni.
· High ethwele amandla kanyekanye nezidingo okuxhunyanwa torque engu esikhulu ukuthambekela ezinkulu;
· Akuphoqelekile ephezulu ukucacisa ofanayo spline pair module;
· Le nkampani iye isingathwe / nengxenye ekuthuthukiseni umkhakha amazinga (2 namazinga kazwelonke, 2 umkhakha amazinga);
· Ukuvikelwa Core patent (16 ezisunguliwe / imodeli Umbuso indawo patent);
Torque ububanzi: 1700kNm ~ 19405kNm
Swing ubukhulu: 600 ~ 1300mm
engela besikhatsi: ± 10 °
Elikhulu Cross-oluvala amasondo Universal Coupling:
It is ikakhulukazi elisetshenziswa idrayivu eyinhloko ishidi ashisayo iphuma, esigabeni steel steel ipayipi ukukhiqizwa umugqa.
· High ethwele amandla nezidingo okuxhunyanwa torque engu esikhulu ukuthambekela ezinkulu;
· Le nkampani iye isingathwe / nengxenye ekuthuthukiseni 1 umkhakha standard;
· Ukuvikelwa Core patent (7 ezisunguliwe / imodeli Umbuso indawo patent);
Torque ububanzi: 1700kNm ~ 5860kNm
Swing ubukhulu: 600 ~ 900mm
Ubuningi kuka engela: ± 15 °
Amazinyo ezihlalweni zobukhosi bethwele nemiqhele Coupling Gear
Ezivamile Amazinyo ezihlalweni zobukhosi bethwele nemiqhele Coupling Gear
Heavy-duty Amazinyo ezihlalweni zobukhosi bethwele nemiqhele Coupling Gear
Bar And Wire Rod Mill ezihlalweni zobukhosi bethwele nemiqhele Amazinyo Coupling Gear
Heavy-duty Amazinyo ezihlalweni zobukhosi bethwele nemiqhele Coupling Gear Of Zezıhlabane Tandem Finishing imele Rolling
Ezivamile Amazinyo ezihlalweni zobukhosi bethwele nemiqhele Coupling Gear:
· Kwenzelwe iphrofayela izinyo imingcele, futhi amandla ethwele luyanda 15 ~ 20% uma kuqhathaniswa no-imikhiqizo efanayo emakethe;
· TG uchungechunge imikhiqizo Taier ejwayelekile babe jikelele, amboza ngokugcwele zonke ezibekiweko 11 uchungechunge esezingeni GIICL, GIICLZ, GCLD, NGCL, NGCLZ, WG, WGP, WGT, WGZ, WGC, WGJ;
· Esibanzi ukufuduka emincane ye input bese okukhipha imiphini uvunyelwe, ± 1.5 ° ngomklamo jikelele kanye ± 5 ° ngomklamo ekhethekile;
· Ukuvikelwa Core patent (13 ezisunguliwe / imodeli Umbuso indawo patent);
Torque ububanzi: 0.63kNm-1750kNm
Ukucaciswa ezahlukene: TG1 ~ TG38
Swing ubukhulu: 103 ~ 1060mm
Ukufakwa engela: ± 1.5 °
Heavy-duty ezihlalweni zobukhosi bethwele nemiqhele Amazinyo Coupling Gear:
It is ikakhulukazi elisetshenziswa drive main ezishisayo iphuma ukukhiqizwa ishidi umugqa ugingqe esigayweni.
· Ukubeka Dual ezinyweni ohlangothini izinyo phezulu umsebenzi uzinze we elihlangana;
· Kwenzelwe uphawu design ukuvimbela ukulahleka lubricating amafutha, futhi sifinyelele eside Lubrication egcwele sihehe izinyo ebusweni;
Torque ububanzi: 1600kNm ~ 10750kNm
Swing ubukhulu: 1080 ~ 1900mm
Ukufakwa engela: ± 1 °
Isondlo umjikelezo: 500 h / isikhathi
Bar Futhi Wire Rod Mill Amazinyo ezihlalweni zobukhosi bethwele nemiqhele Coupling Gear:
It is ikakhulukazi elisetshenziswa drive eyinhloko ibha kanye wire induku esigayweni.
· High-ngokunemba ofanayo spline pair for bushelelezi ngokuhambisa;
· Gear pair ukubeka phezulu ngoba ekusebenzeni;
· Akuphoqelekile isigaba-adjustable module;
Torque ububanzi: 31.5kNm ~ 1600kNm
Swing ubukhulu: 200 ~ 760mm
Ukufakwa ndlela: Kuqondile, ovundlile
Heavy-duty Amazinyo ezihlalweni zobukhosi bethwele nemiqhele Coupling Gear Of Zezıhlabane Tandem Finishing Rolling Umi:
It is ikakhulukazi elisetshenziswa drive eyinhloko ashisayo iphuma ishidi ukukhiqizwa umugqa kokuqeda iyunithi ugingqe.
· Wokuqala yangaphakathi kwegazi ophoqelelwe mncane Lubrication uwoyela ubuchwepheshe China sika, umholi umkhakha;
· Ukwakhiwa kabili uphawu ukuqinisekisa inkonzo nokuphila isikhathi eside shaft elihlangana;
· High-ubulukhuni igiya pair for umthwalo ezinkulu bephethe torque engu;
· Le nkampani iye isingathwe / nengxenye ekuthuthukiseni umkhakha namazinga kazwelonke / (1 standard kazwelonke, 3 umkhakha amazinga);
· Ukuvikelwa Core patent (17 ezisunguliwe / imodeli Umbuso indawo patent);
Lub Amafutha lokushisa: 20 ~ 45 ℃
Lub Amafutha ingcindezi: 1.2 ~ 1.8bar
Lub Amafutha ukugeleza: 15L / min
Torque ububanzi: 170kNm ~ 6000kNm
Swing ubukhulu: 360 ~ 1100mm
engela Yokusebenza: ± 1.5 °
Hot Rolling Mandrel
Yangaphakathi Water Ukubandisa (isigamu-ivaliwe)
Amanzi Ukubandisa Yangaphakathi (Uhlobo evulekile)
Rod - plunger Wedge-uhlobo Mandrel (kwagcizelela)
Rod - plunger Wedge-uhlobo Mandrel
Yangaphakathi Water Ukubandisa (isigamu-ivaliwe):
Ifanele eside coiling;
Isiqinisekiso ndima ecacile namafutha mandrel ngokusebenzisa Ukupholisa shaft main;
Gwema nomthelela ohlelweni mandrel amafutha okubangwa ikhoyili bayawuqhwaga, njll
Ubuningi ikhoyili isisindo: 35T
Ubuningi ikhoyili ububanzi: 1650mm
Coiling strip ukujiya: 1.2-12.7mm
Coiling lokushisa: 100 ~ 850 ℃
Amanzi Ukubandisa Yangaphakathi (Uhlobo evulekile):
Excellent Ukupholisa umphumela ingxenye ukuthuthukisa ukuphila inkonzo yayo;
Excellent mandrel ukuzinza; wesikhathi eside coiling.
Rod - plunger Wedge-uhlobo Mandrel (kwagcizelela):
Coiling umthamo Ephakeme mandrel;
I mandrel kufanelekile ukungezwani ezinkulu coiling futhi coiling ensimbi iphayiphi of X80, X100, X120
amandla Motor: 1850KW
Ubuningi ikhoyili isisindo: 41T
Ubuningi ikhoyili ububanzi: 2130mm
Coiling strip ukujiya: 1.2-25.4mm
Rod - plunger Wedge-uhlobo Mandrel:
I abasabalalisi ipayipi izesekeli ezingenisiwe izingxenye, kanye Lubrication inakekelwa kahle;
Ubuningi ikhoyili isisindo: 48.7T (Max)
Ubuningi coiler ububanzi: 2400mm
Cold Rolling Mandrel
Pyramid sleeve se Mandrel
Mandrel Of Pyramid Shaft Uhlobo
Mandrel Of Uhlobo Wedge uvule
Mandrel Of Uhlobo Wedge-ivaliwe
Pyramid sleeve se Mandrel:
It is kabanzi kule decoiler imigca ukukhiqizwa, ezifana aba, pickling, ugingqe awushintsheki futhi kuyinenge; it is libuye lisetshenziswe recoiler ubendle encane efana galvanizing umugqa.
· Isakhiwo Simple, okufutshane yokukhiqiza phambili isikhathi;
· Easy ukuqaqa futhi silondoloze;
Operating lokushisa: 0 ~ + 120 ℃
Engaphandle ubukhulu esifakiwe: φ468, φ508, φ610, φ762
Strip ububanzi: 2130 (Max)
Jwayelekile yesondlo umjikelezo: izinsuku ezingu-180 / isikhathi
Mandrel Of Pyramid Shaft Uhlobo:
It is kabanzi kule recoiler amakhaza ugingqe umugqa letifana esigayweni Goal futhi SENDZIMIR ugingqe abandayo isigayo; it is libuye lisetshenziswe decoiler nezimfuneko ephakeme ukungezwani ezifana yokululama umugqa.
· Rigidity Good, efanelekayo ukungezwani ezinkulu coiling;
· Kungenzeka Axial noma osabalalayo emhlathini wokubacindezela enikeziwe phezu ingxenye;
Strip ububanzi: 2600 (Max)
Mandrel Of Uhlobo Wedge-ovulekile:
It is kabanzi kule recoiler komugqa letifana galvanizing futhi kuyinenge futhi Carrousel recoiler.
· Amandla Kahle mandrel kushaft main;
· I nhlonhlo Axial ka mandrel ngokuvamile ezazenziwe ngethusi yabalingisi, ngokuhle ngomshikisho ukusebenza kwamanzi ngokuhambisa;
Mandrel Of Uhlobo Wedge-ivaliwe:
It is kabanzi kule recoiler imigca letifana aba futhi eqondisa.
Ayikho igebe phakathi ingxenye eduze lapho mandrel usembuthanweni ephelele.
Iziphethu Oku-ukulayishwa ezifakiwe ingxenye ukuqinisekisa ukuthi akukhona zathukululeka.
Hot Rolling Shearing Blades
Plate isigayo yokugunda izindwani
Cold Rolling Shearing Blades
Hot Rolling Shearing Blades:
Ikakhulu elisetshenziswa ashisayo okuqhubekayo ugingqe futhi CSP zokukhiqiza imigqa
ubulukhuni High, amandla kanye ubunzima ashisa kakhulu
Excellent ukuzinza ezishisayo kanye ezishisayo Ukukhathala Ukusebenza
hardenability Okuhle Ngomsebenzi ukugaya okuphindaphindiwe
izinga lokushisa lokusebenza: 800 ℃ ~ + 1150 ℃
Usayizi ububanzi (ubude): 650 ~ 2500mm
Ukuqina ububanzi: HRC42-50
umjikelezo isevisi ejwayelekile: 15,000times
Plate isigayo yokugunda izindwani:
Ikakhulu elisetshenziswa esigayweni ipuleti 2800, 4300, njll
amandla High, ubulukhuni okusezingeni eliphezulu futhi ubunzima okusezingeni eliphezulu
Operating lokushisa: 0 ~ 200 ℃
Ukuqina ububanzi: HRC50-56
umjikelezo isevisi ejwayelekile: sokuhlukanisa phuca - 15 izinsuku disc ezinkulu phuca - ezinsukwini ezingu-7 Scrap phuca - 15 izinsuku
Cold Rolling Shearing Blades:
Ikakhulu asetshenziswe imigqa ukukhiqizwa ugingqe abandayo, annealing okuqhubekayo, pickling, galvanizing, njll
bafake High ukumelana naso futhi kwenze ubunzima
Ifanele multi-steel grade umkhiqizo ahlabayo
lokushisa ongalusebenzisa: lokushisa Jwayelekile
Ukuqina ububanzi: HRC54-60
Inani njalo steel Imi: amathani 3,000 -5,000
Composite esishelelayo Plate Of Umsebenzi Roll Ukunikeza chock
Composite esishelelayo Plate Of Emuva Up Roll Ukunikeza chock
Composite esishelelayo Plate Of Rolling Mill Yima (izindlu Uzimele)
Composite esishelelayo Plate Of Umsebenzi Roll Ukunikeza chock:
It efakwe zombili umqulu umsebenzi wokunikeza chock nenhloso Ukuvikelwa.
· I ungqimba ukuwohloka plate base angaphansi zamakhemikhali isibopho Metallurgical Ngamandla okusezingeni eliphezulu kunenze nisondelane;
· Indaba Welding futhi ukugqoka ungqimba ukushuba kungenziwa kalula ekhethiwe ngokuvumelana nezimo ezahlukene zokusebenza, kanye ukushuba bafake ungqimba imikhiqizo siphelile akuyona esingaphansi 2mm;
Surface ubulukhuni: HRC50 ~ 55;
Operating lokushisa: 0 ~ + 350 ℃
Ukucaciswa ezahlukene (esiphezulu): 1000 × 600mm
ukujiya ejwayelekile: 20 ~ 40mm
Jwayelekile Isondlo umjikelezo: izinsuku ezingu-180 / isikhathi
ukuphila okuvamile isevisi ukusetshenziswa: izinyanga ≥24
Composite esishelelayo Plate Of Emuva Up Roll Ukunikeza chock:
It efakwe zombili izinhlangothi lubuye roll nithela chock nenhloso Ukuvikelwa.
Surface ubulukhuni: HRC58 ~ 60;
Ukucaciswa ezahlukene (esiphezulu): 1800 × 900mm
ukujiya ejwayelekile: 25 ~ 45mm
ukuphila okuvamile isevisi ukusetshenziswa: izinyanga ≥18
Composite esishelelayo Plate Of Rolling Mill Yima (izindlu Uzimele):
It efakwe zombili izinhlangothi lubuye roll nithela chock wokugaya ume injongo Ukuvikelwa.
· I ungqimba egqoke nesitsha base angaphansi zamakhemikhali isibopho Metallurgical Ngamandla okusezingeni eliphezulu kunenze nisondelane;
Surface ubulukhuni: HRC58 ~ 60
Ukucaciswa ezahlukene (esiphezulu): 1900 × 1000mm
ukujiya ejwayelekile: 30 ~ 50mm